Joe Biden ayaa Sen. Kamala Harris u soo xushay in ay u noqoto Madaxweyne ku xigeen oo… – Hagaag.com
Joe Biden ayaa Sen. Kamala Harris u soo xushay in ay u noqoto Madaxweyne ku xigeen oo…
Posted on 12 Agoosto 2020 by Admin in World // 0 Comments
Joe Biden, oo ah musharraxa Xisbiga Dimoqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka, ayaa ku dhawaaqay Talaadadii inuu u doortay senatorad ka tirsan California, Kamala Harris, in ay doorashada ku weheliso jagada Madaxweyne ku xigeenka.
Sidaa daraadeed, Harris 55, waxay noqoneysaa haweeneydii ugu horreysay oo aan caddaan ahayn (aabaheed waa Jamaican, hooyadeedna waa Hindi) u tartamaysa jagada madaxweyne ku xigeen oo ah jago aad u weyn taariikhda Mareykanka, waxay indha indheeyayaashu rumeysan yihiin in doorashadani ay siineyso Biden lammaane heer sare ah taasoo u saamaxeysa inuu sii wado weerarka Madaxweynaha Jamhuuriga Donald Trump.
Biden ayaa ku sheegay boggiisa Twitter-ka, “Sharaf ayay ii tahay in aan ku dhawaaqo in ay igu weheliso doorashada Kamala Harris” oo u tartamaysa jagada madaxweyne ku-xigeenka.
Dhinaceeda, Harris ayaa waxay soo dhoweysay doorashada musharraxnimada dimuqraadiga Joe Biden ku xigeenkiisa, waxayna ballanqaaday inay ka shaqeyn doonto mideynta Mareykanka, iyo inay karaankeeda ku dadaali doonto sidii Biden Madaxweyne u noqon lahaa.
Dhinaca kale, Madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo daabacay fiidiyow olole doorasho kaasoo uu ku tilmaamay Kamala inay tahay bidixda xagjirka ah, wuxuuna u arkaa Biden iyo Harris inay yihiin xulasho aan u fiicneyn Mareykanka.
Marka la eego xasillooni darada dhinaca bulshada ee soo maray dalka Mareykanka bilooyin ka hor oo la xiriirtay cunsuriyadda iyo naxariis darada booliis ee ay u geystaan dadka Mareykanka ah ee madow, sidaa darteed ayaa Biden waxaa qasab ku noqotay inuu u soo xusho madaxweyne ku xigeenka haweenay aan cadaan aheyn oo tartanka la gasha.
Khubaradu waxay rumeysan yihiin inuusan Biden diirada saarin qiimeyntiisa qof ka caawisa inuu u noqdo Madaxweyne kuxigeen kaliya, laakiin taa bedelkeeda uu doorto qof u qalma inuu wax ka hogaamiyo xukunka dowladda Mareykanka, Waxay noqon kartaa Harris haweeneydii ugu horeysay ee gaarta xafiiska Aqalka Cad ee Mareykanka.